Pikantsary Lock Lock dia mitondra ny wallpaper Bing | Androidsis
Avy amin'ny Microsoft Garage nanaitra anay rehetra izy ireo rehefa nandefa fampiharana efatra mahaliana izy ireo tamin'ny fotoana iray, izay miavaka ny Screen Lock Next. Ity vondrona mpamorona ity dia manana ny fahaizany mahay mandefa fampiharana Android tsy miankina nefa tsy misy fanerena. Izany dia namela azy mitondra kalitao ampy ho an'ny fampiharana Navoaka tamin'ny Android ary androany dia mahita iray hafa manaraka isika aorian'ny fanidiana ny Screen Lock Next.
Picturesque Lock Screen no fampiharana efa azo maimaim-poana ao amin'ny Play Store ary izany dia manaraka ny làlan'ny kalitaon'ny Microsoft amin'ny fampiharana Android. Ireo fiasa manamarika indrindra dia miainga amin'ny fiasa tena ilaina toy ny fampidirana sary tsara ho an'ny efijery hidin-telefaona. Tsy misy isalasalana fa mahita fomba tsara i Microsoft amin'ny fanombohana fampiharana mety ho an'ny Android.
1 Fampiharana tena tsara ho an'ny hidin-trano
2 Widget bebe kokoa
Fampiharana tena tsara ho an'ny hidin-trano
Pikantsary Lock Lock afaka mandalo ho mpandefa faharoa, satria avy any ianao dia afaka mifamadika eo anelanelan'ny takelaka samihafa hahitana ny bara fikarohana Bing eo an-tànany, fahana vaovao azo namboarina, tatitra momba ny toetr'andro, fampandrenesana momba ny fitaovana, fidirana mivantana amin'ireo rindranasa be mpampiasa indrindra sy fampidirana ireo toe-javatra sasany ao amin'ilay rafitra.
Ny lafin-javatra iray hafa mahaliana momba ny estetika hita maso dia ny fampidirana ny sary default Bing, Mamela anao hisolo ny toerana misy an'ireo izay misy farany amin'ny herinandro izay hihaonantsika. Efa fantatry ny rehetra fa i Bing dia manana sary tsy mampino sy tsara tarehy toy ny valiha.
Widget bebe kokoa
Screen Screen Lock dia a tena mahaliana fampiharana lamba fanidiana ary voalamina tsara ary manana izay ilainao rehetra hahatongavanao ho fampiharana tianao indrindra amin'ity asa ity. Na dia mety misy kileman-tànana kely noho ny iray hafa aza, toy ny famenoana Widget ny hidin-trano indray rehefa efa manana azy ireo eo amin'ny efijery birao misy azy ny mpampiasa.
Endri-javatra iray hafa izay mety tsy hita dia tsy manana safidy hamaha ny telefaona tenany, noho izany dia hanana widgets be dia be ianao handany data ary izany dia ho ao ambadika ao amin'ny fahatsiarovana anatiny ny telefaona.
Raha fintinina dia hidin-trano tsara izay azo ampiasaina mpampiasa sasany raha ny hafa kosa tsy mahafeno ny filany rehetra. Ny tsara indrindra dia manohy mampiseho amintsika ny fahaizany mandefa fampiharana Android manana kalitao tsy mampino i Microsoft. Tohizo izany.
Sintomy ny APK an'ny Screen Lock Lock
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » Microsoft nandefa ny Screen Lock Lock, rindrambaiko fanidiana efijery maimaimpoana ho an'ny Android [APK]
Jordi Obon dia hoy izy:
Milaza amiko izy fa tsy mifanaraka amin'ny iray amin'ireo fitaovana ...
Valio i Jordi Obon
@Jordi Obon dia nanavao ny fidirana tamin'ny APK